BEIJING: Mnangagwa meets Chinese president; promised more economy support - NewZimbabwe.com BEIJING: Mnangagwa meets Chinese president; promised more economy support - NewZimbabwe.com
BEIJING: Mnangagwa meets Chinese president; promised more economy support
The two delegations meet at the Great Hall of the People in Beijing
BEIJING: Chinese President Xi Jinping on Wednesday met with Zimbabwean counterpart Emmerson Mnangagwa who attended the 2018 Beijing Summit of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC).
Xi thanked Mnangagwa and the Zimbabwean government for making important contributions to the success of the FOCAC Beijing Summit and appreciated that President Mnangagwa had expressed the willingness to jointly develop the Belt and Road with China at the summit.
“China and Zimbabwe have always been good friends, good partners, and good brothers,” Xi said, noting that China always supports Zimbabwe in safeguarding sovereignty, security, and development interests, and in opposing foreign interference and independently choosing its development path.
China will continue to support Zimbabwe’s efforts to develop and reinvigorate the economy and allow it to improve by itself, Xi said.
Mnangagwa said Zimbabwe and China have a unique friendship and that the Zimbabwean government and people appreciate China’s precious assistance to help improve the country’s economy and its people’s livelihood for years.